La vanille 6kg aza moa ny sera ataon'ny tanora efa hidirana am-ponja. Raisina toy ireny mpangalatra ireny izy ireo, nefa sera sy fitadiavana avokoa izany, tsy lavanila halatra no nentiny, fa lazaina tsy nisy taratasy, any ambanivolo anie tsy resaka taratasy fa fifampitokisana e.
Mahatsiaro mibaby ny toekarem-pirenena, nefa dia atao anjorom-bala hatrany ireo mpandraharaha maro.
Ireo mpamboly sy mpiompy, mpanjono, anisan'ny mpandraharaha maro indrindra, ireo mpivarotra izay maro no misehatra aminy, ireo mpanao hotely sy fandraisam-bahiny, na mpanangom-bokatra, na mpivaro-mandeha, ireo mpitatitra, ireo mpampanofa fiara, izay hitantsika ny fahoriana hianjadian'ny maro, ireo mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, mpanao kariera, ireo mpanao import -export, ireo mpanao asa tanana, ireo miasa tena, ny vola takian'ny banky sy ny micro cred efa mampitsiry volofotsy, ao ny efa very saina manjary manaonao foana.
Mila fepetra mazava iraisana ny mpandraharaha, fa hatreto dia mahatsiaro tena tsy misy miahy ny maro. Tsy fanemorana ny fizakana ny hetra no tadiavina fa ny fanafoanana izany hetra izany ohatra.
Raha ny banky no andrasana anome fanemorana na famatsiana trésorerie na vola entina mihetsika, dia tsy ho tonga any amin'ny tena mila azy izany fa ireo vaventy afaka misehatra amin'ny banky ihany no misitraka an'izany.
Maro ireo orinasa tsy mahazo famatsiam-bola amin'ny banky izany. 22% ve ny zana-bola alainy ankoatran'ny 125% garantie, dia iza no hanana izany. Ny micro cred efa tafakatra 72% ny zana-bola, fa mody lazaina fa 6%, nefa 6% isam-bolana io, izany hoe 72% isan-taona. Toe-karena inona no andeha amin'izany zana-bola 72% izany.
Raha tena vonona ny fanjakana, dia banky Malagasy atsangana, ary banky ahafahan'ny rehetra mindram-bola latsaky ny 1% ny zana-bola. Ahenao ny hetra ampitataovana ny orinasa, amorao ny resaka fahazoan-dalana, alalao ny tsenam-pihariana, omeo ny faritra ny fahefana ahafahany mampiasa ireo orinasa ao an-toerana hanao ny tolotr'asam-panjakana, ampidiro ny jiro sy rano.
Tsy misy orinasa sy fiariana andeha izany raha tsy misy na midangana ny vidin-jiro sy rano.
Nahoana ny any Antsiranana sy Mahajanga no mandoa vidin-jiro lafo noho ny ao Antananarivo sy Antsirabe? Ampitovio ny faritra rehetra.